Ungafunda Yonke Iposi Uma Ngi ... | Martech Zone
Ungafunda Yonke Iposi Uma Ngi…
NgoLwesithathu, Januwari 23, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Umphathi wami omkhulu uqashe insiza yesikhashana ukukhiqiza ikhophi lokumaketha esiyidingayo lapho sisebenzisa iwebhusayithi yethu entsha yokumaketha. Umuntu oqashiwe unesizinda sokumaketha esiqinile kepha hhayi isizinda sokumaketha sewebhu - ngiyaqiniseka ukuthi bazokwazi ukukukhetha kalula (ngiyethemba kunjalo!).
Ukunikeza umkhombandlela othile, nginikeze umbhali wamakhophi izinsiza ezithile ezinhle ekubhaleni okuqukethwe. Enye yezinsizakusebenza kungamabhulogi aphezulu wokukhangisa okuqukethwe kaJunta42. Angiwabhekisanga wonke amabhulogi akulolo hlu kepha kunokwethenjelwa okuthile engikutholile CopyBlogger phambili lapho! Ngizobe ngifunda amanye amasayithi kungekudala.
Amathiphu Wokubhala Kopisha weSayithi Lakho noma Ibhulogi:
Ngaphandle kokuqhubeka kokunye, nazi izeluleko eziphezulu zokubhala ikhophi. Kufanele ngiqale ngokusho ukuthi nginecala lokungasebenzisi lokhu kukho konke engikuthumela kubhulogi. Ngiyethemba uzokwenza umsebenzi ongcono kunami engiwenzile. Wena kuthanda vuna imivuzo!
Izihloko zezindaba ezihehayo - ukukhetha izihloko zezindaba ezingabukeki njengephephandaba kepha, kunalokho, ziphakamisa intshisekelo yabafundi njengoba begxuma ngemiphumela yenjini yokusesha futhi beqa ama-RSS feed abo.
Okuqukethwe kwe-Chunking - indawo emhlophe ngumngane wethu. Ukwenza ikhophi lakho lifundeke… noma lifinyeleleke… gwema izigaba ofunde ukuzibhala ekolishi. Esikhundleni salokho, khetha isihloko esiqinile, noma isihloko esincane, silandelwe isigaba somusho owodwa noma emibili enamandla kakhulu. Sebenzisa uhlu olunamachashazi noma olunezinombolo.
Xhuma ngokukhululekile - Xhumanisa ngaphakathi kuma-athikili akho usebenzisa amagama angukhiye azoshayela ithrafikhi. Futhi xhuma ngaphandle, ukwazisa amanye amabhulogi azokukhokhela ngolunye usuku. Lokhu kuqinisa inkomba yakho yenjini yokusesha, kusiza ukugcina izivakashi kusayithi lakho isikhathi eside, futhi kuthuthukisa amanye amabhulogi - kuveza izithameli zakho nakubo nangokuphambene nalokho.
Sebenzisa amagama angukhiye nemisho eyisihluthulelo - ukuqonda ukuthi abantu bafunani kuwebhu kuyisihluthulelo sokuqonda ukuthi isayithi lakho lizotholakala kanjani ngezinjini zokusesha. Ukusebenzisa amagama angukhiye nemishwana eyisihluthulelo kukho konke okuqukethwe kwakho kuzosiza ukuhambisa lokho okuqukethwe kuzinjini zokusesha futhi kulethe abantu kusayithi lakho abebefuna lokho okunikezile.
LONKE ikhasi liyikhasi lokufika - Abathengisi bewebhu bavame ukukhuluma ngamakhasi okufika futhi bakhonjwa ngokukhululekile lapho uqondisa khona isivakashi kusuka ku-imeyili noma ukukhushulwa. Kodwa-ke, njengoba okuqukethwe kwewebhusayithi yakho noma kwamabhulogi (ngethemba) kukodwa kukhonjwe ngezinjini zokusesha, lokhu kusho ukuthi lonke ikhasi elibhekiswe eceleni liba yikhasi lokufika! Lokho kusho, kubalulekile ukuthi uphathe ikhasi ngalinye sengathi umfundi akakaze afike kusayithi lakho ngaphambili. Ikakhulukazi nge-blog! Ngaphansi kuka-10% wezivakashi zami ezintsha zifika kubhulogi lami ngekhasi lami lasekhaya.
Ngonyaka odlule ngabhala, Misa Ukubhalela Izinjini Zokusesha. Kwakuyindlela eqinile yokulwa nokubhala okuqukethwe kwakho kuphela ukuheha izinjini zokusesha ngoba kuzovala abafundi. Ngimi ngalowo msebenzi; noma kunjalo, ngikholelwa ukuthi kukhona ibhalansi lapho ubhala okuqukethwe kwakho.
Uma ungabhala okuqukethwe kwakho ukuze abafundi bakuthole, ukujabulele, FUTHI uthole ukunakekelwa kwezinjini zokucinga usuthole ibhalansi ephelele.
Tags: adisikhangisoIsikhangiso se-bannerumabhebhanadesign isikhangisoabaphathi bewebhu be-googlewebsite designnokwenza iwebhusayithiukuthuthukisa i-websiteukuhlela iwebhusayithi
Njengoba ngifaka ku-Twitter nge-Snitter…
Jan 27, 2008 ngo-10: 51 PM
Siyabonga ngalezo zeluleko,
Angikaze ngicabange nokuphatha wonke amakhasi ngathi yikhasi lasekhaya.
Kunengqondo ukuthi akubona bonke abantu abangena ekhasini lasekhaya.